ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့် 
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့် 
Posted by kai on Mar 13, 2013 in History | 30 comments
From: YeMyintAung – <yemyintaungone@..
Subject: ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့် 
Date: Thursday, March 9, 2013
မသိနားမလည်သူတွေဖတ်နိုင်ဖို့ သိနားလည်တဲ့သူတွေကရှာဖွေလေ့လာရေးသားတင်ပြကြပါတယ်။ ရေးသူက မသိနားမလည်
သူတွေအတွက် ရှာဖွေတင်ပြရေးသားရာမှာ အချက်အလက် အကြောင်းအရာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံး ဆန်းစစ်ပြီး၊ မှန်ကန်မှ
ရေးသား တင်ပြသင့်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကို ရေးသားဖေါ်ပြတဲ့အခါမှာ ပေါ့ပေါ့တန်တန်၊ ပြီးစလွယ်
သဘောမျိုး၊ မှန်/မမှန် ဆန်းစစ်မှု မရှိဘဲ ရေးသားဖေါ်ပြခြင်းဟာ မသိနားမလည်သူတွေကို အမှားတွေကို သင်ပေးလိုက်တာနဲ့ 
တူပါတယ်။ အမှားတွေကို ဖတ်ရှုရတဲ့သူတွေကလည်း အမှန်လို့ ဘဲစွဲပြီးသွားရင်တော့ အမှားသံသယာရှည်ကြီးထဲမှာ မျောနေမှာ
ပါဘဲ။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အားနည်းသူတွေ၊ မိမိကိုယ်တိုင် ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ တခါ
ဖတ်ထားပြီးသားကို အမှန်လို့ စွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သိနားလည်လို့စာရေးပြီဆိုရင် ရေးတဲ့စာတွေဟာ အချက်အလက်မှန်ကန်မှု၊ အကြောင်းအရာခိုင်လုံမှု၊ ကျိုးကြောင်း
ဆီလျော်မှု စတာတွေကိုအလေးထားရေးသားရပါ့မယ်။ အကြောင်းအရာအချက်အလက်မှန်ကန်ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲ၊ လေဖမ်းတရားနာ
နားစွန်နားဖျား ကြားနာဖူးတာလေးနဲ့ ဘဲ ရေးသားတင်ပြခြင်းဟာ စာဖတ်သူတွေကို ဗဟုသုတမဖြစ်စေဘဲ၊ အမှားတွေကိုသင်ပေး
လိုက်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ၄င်းအမှားများကို မသိနားမလည်သူတွေကဖတ်ပြီး အမှားတွေကိုအမှန်လို့ ထင်မှတ်ယုံကြည်သွားခဲ့ရင်
အမှား ဗဟုသုတနဲ့ ကြီးပြင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်မှန်ကန်၍ ကောင်းသောစာဖြစ်ဘို့ စာရေးသူများအပေါ် များစွာ
တည်မှီပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် စာရေးသူများမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
အထူးသဖြင့်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိတွေကို ရေးသားရာမှာ ပိုပြီးဂရုတစိုက်ရေးသားဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထင်ကရရှိနေတဲ့
သက်သေအထောက်အထားတွေကို ရေးသားရာမှာအချက်အလက် အကြောင်းအရာတွေကို အသေအချာ ဆန်းစစ်ပြီး၊ မှန်ကန်
မကြာသေးခင်က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့် နဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့စာတပုဒ် ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန့် ၏
(၁၀၄) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် Myanmar Talented Youth Club ( ပါရမီရှင်မြန်မာလူငယ်များကလပ် )ရဲ့ အင်တာနက်
စာမျက်နှာမှာရေးသားဖေါ်ပြချက်ကို မိုးမခ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ထပ်ဆင့် ဖေါ်ပြထား၍ ဖတ်ရှုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးဦးစွာဆောင်းပါးရဲ့ ထိပ်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကိုအမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ သတိထားမိချင်မှထားမိပါမယ်။ အင်္ဂလိပ်လို
U THANT 105th BIRTHDAY လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဓါတ်ပုံအောက်မှာ _
(ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာ ဗမာပြည်သာ ဦးသန့်၏ ၁၀၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် ဖော်ပြပါသည်။) လို့ ရေးထား
တာကိုတွေ့ ရပါမယ်။ ဓါတ်ပုံထဲကစာသားနဲ့ အောက်စာသား မတူညီ ကွဲပြားမှားယွင်းနေတာ ဦးစွာတွေ့ ရပါတယ်။
ကာယကံရှင် ဦးသန့် ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်တချက်ကို မှားယွင်းဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အဲဒါက
( ဦးသန့်သည် ဒေါ်သိန်းတင်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး၊ တဦးတည်းသော သမီး ဖြစ်သူ အေးအေးသန့် ထွန်းကားခဲ့သည်။ ) လို့ 
အမှန်တကယ်က ဦးသန့် မှာ သားသမီး(၃) ဦးမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဦးသန့် အကြောင်းဖေါ်ပြထားတဲ့ Wikipedia, the free
encyclopedia website ( http://en.wikipedia.org/wiki/U_Thant ) စာမျက်နှာမှာ ဖေါ်ပြထားတာကို အောက်တွင်
U Thant and his family in 1957, including
son Tin Maung Thant and daughter Aye Aye Thant
U Thant had three brothers: Pantanaw U Khant, U Thaung, and U Tin Maung. He was married to Daw Thein
Tin. U Thant had two sons, but lost both; Maung Bo died in infancy, and Tin Maung Thant fell fromabus during
a visit to Yangon. Tin Maung Thant’s funeral procession, which was attended by dignitaries, was grander than that
of the state funeral of Commodore Than Pe,amember of the 17-man Revolutionary Council and minister of health
and education. U Thant was survived byadaughter, an adopted son, five grandchildren, and five great-grandchildren
(three girls and two boys). His only grandson, Thant Myint-U, isahistorian andaformer senior official in the UN’s
Department of Political Affairs and the author of The River of Lost Footsteps, in partabiography of U Thant.
အထက်ဖေါ်ပြပါဓါတ်ပုံများနှင့် ပူးတွဲပါရေးသားချက်များကို ဆန်းစစ်ဖတ်ကြည့်မည်ဆိုပါက ဦးသန့် တွင် သားကြီး မောင်ဘို၊
ဒုတိယသား တင်မောင်သန့်နှင့် သမီး အေးအေးသန့်တို့ (၃) ဦးမွေးဖွားခဲ့တာကို သိနိုင်ပါတယ်။ သားကြီးမောင်ဘို ကတော့
မွေးဖွားပြီး/မွေးကင်းစ အရွယ်မှာဆုံးပါးခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယသား တင်မောင်သန့် က ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်း ဇီဝိတဒါနဆေးရုံအနီးမှာ
ဘတ်စ်ကားပေါ်ကလိမ့်ကျပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ သမီး (ဒေါ်) အေးအေးသန့် တဦးတည်းသာ သက်ရှင်ကျန်ရစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်း ဦးသန့် တို့ တွင်သားသမီး မရှိသည့်အတွက် ဆွေမျိုးမိတ်သဟာများမှ ရှာဖွေပေးသည့် လသားအရွယ် မိဘမဲ့သား
ယောက်ျားလေးတဦးကို သားအဖြစ်မွေးစားခဲ့ကြပါတယ်။ အမည် မောင်စောလွင် တွင်သည်။ သားကြီးမောင်ဘို မမွေးဖွားမီ
(သို့ မဟုတ်) ကွယ်လွန်ပြီးမှ မွေးစားသည် ဆိုသည်ကိုတော့ မြန်မာပြည်ထုတ်စာအုပ်စာတမ်းများတွင် ရှာဖွေတွေ့ ရှိမိခြင်းမရှိ
သေးသည့်အတွက် အတိအကျမသိရှိရပါ။ ( သိသူများရှိပါက ရေးသားတင်ပြပေးစေလိုပါသည်။) မွေးစားသား စောလွင်သည်
ပညာကိုလည်းကောင်းစွာသင်ကြားမှုမရှိဘဲ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀တွင် မိန်းခလေးတဦးကိုခိုးပြေး၍ အိမ်မှထွက်သွား
သည့်အတွက် ဦးသန့် မှ သားအဖြစ်မှစွန့် လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သားအရင်းဖြစ်သူ တင်မောင်သန့် ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါတွင်
ဦးသန့် ဇနီး ဒေါ်သိန်းတင်မှ သားယောက်ျားမရှိတော့သည့်အတွက် စောလွင်ကိုပြန်လည်မွေးစားရန် မျက်ရည်ယိုရွှဲ အသနားခံ
တောင်းပန်သောကြောင့် ပြန်လည်မွေးစားရန် ဦးသန့် မှမြန်မာနိုင်ငံရှိ သတင်းမီဒီယာ/သတင်းစာများမှတဆင့်ဆက်သွယ်ရှာဖွေ
ခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင် ခလေး(၂)ယောက်နှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေသော (ဦး) စောလွင်သည်သတင်းစာတိုက်သို့ ဆက်သွယ်
လာသဖြင့် အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပါတယ်။ ၄င်းတို့ မိသားစုသတင်းဓါတ်ပုံကိုလည်း ထိုစဉ်အခါကသတင်းစာများတွင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
များမကြာမီ ဦးသန့် မှလေယာဉ်လက်မှတ်များပေးပို့ ခဲ့သဖြင့် (ဦး)စောလွင်တို့ မိသားစုသည်အမေရိကရှိ ဦးသန့် မိသားစုအတွင်းသို့ 
ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ (ဦး) စောလွင်သည် ဓါတ်ပုံပညာဗဟုသုတရှိသဖြင့် ဦးသန့် မှ ယူအင်န် ဓါတ်ပုံဌာနတွင်အလုပ်သွင်းပေးခဲ့၍
ထိုအလုပ်ဖြင့်ပင် အငြိမ်းစားယူသည်အထိ လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ( ဤစာပိုဒ်ပါအကြောင်းအရာများသည် ဦးသန့် မိသားစုနှင့်ထိတွေ့ 
ဘူးသော အကိုတော် တယောက်မှ ပြောပြသည်များကို ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။)
Myanmar Talented Youth Club ( ပါရမီရှင်မြန်မာလူငယ်များကလပ် ) ရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဖေါ်ပြထားချက်များ
သည် မှားယွင်းစွာဖေါ်ပြထားချက်များဖြစ်နေပါတယ်။ ၄င်းတို့ ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် တင်ပြဖေါ်ပြထားခြင်းသည်လည်း
၄င်းတို့ ကလပ်အသင်းဝင်တဦးတယောက်ကရေးသားတင်ပြခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အခြားတနေရာမှတစုံတဦးကရေးသားထားသည်ကို
ကူးယူဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသို့ ကူးယူဖေါ်ပြခြင်းကို ဆောင်းပါး၏ အဆုံးအောက်ခြေတွင် ( ဤနေရာမှ ထပ်ဆင့် ပြန်လည်
ကူးယူဖော်ပြပါသည် ) ဟုဝန်ခံရေးသားထားတာတွေ့ နိုင်ပါတယ်။ ဤနေရာမှ ဆိုသည်ကို ရှာဖွေကြည့်သော်လည်း အလွယ်တကူ
ရှာဖွေမှု မပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် ဤဆောင်းပါး မူရင်းရေးသားသူ၏ အမည်နာမကို မသိရှိနိုင်ခဲ့ပါ။ သို့ သော် ဤဆောင်းပါးမူရင်းရေးသားသူ
တင်ပြချက်သည် အထက်တွင်ဆိုခဲ့သကဲ့သို့အကြောင်းအရာအချက်အလက် လွဲမှားရေးသားတင်ပြထားခြင်းဖြစ်၍ စာဖတ်သူများကို
အမှားဗဟုသုတပေးခြင်းလို့ ဘဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ အချက်အလက်မှားယွင်း ရေးသားတင်ပြထားခြင်းကို အမှန်ဟုထင်မှတ်ပြီး
Myanmar Talented Youth Club အဖွဲ့ သားများကလည်း ၄င်းတို့ ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် တဆင့်ကူးယူတင်ပြခြင်းဖြင့်
အမှားဗဟုသုတကို ဆက်လက်ဖြန့် ချီပေးလိုက်သလိုဖြစ်နေ၍ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရသူ လူငယ်များသည်လည်း အမှားကိုအမှန်ဟုသာ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ရေးသား တင်ပြလိုတာကတော့ အထက်တွင်ဆိုခဲ့သလို အချက်အလက်မှန်ကန်၍ ကောင်းသောစာဖြစ်ဘို့ ၊
မှန်ကန်တဲ့ဗဟုသုတပေးနိုင်သော စာကောင်းပေမွန်ဖြစ်ဘို့ ၊ စာရေးသူများရဲ့ အဓိကနဲ့ အလေးထားရမယ့် တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း
– Doctor of Humane Letters, Duke University, Durham, North Carolina (7 June 1971). ဤနေရာမှ ထပ်ဆင့် ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။======================
မှတ်ချက်.။ ။ သမိုင်းဖြစ်ပါသဖြင့် မှတ်တမ်းကျန်ရစ်ရန် အီးမေးလ်မှရသည်ကို တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ သမိုင်းကို တိကျအောင် သေချာအောင် အဖက်ဖက်က ၀ိုင်းဝန်းဖော်ထုတ်သင့်ကြပါတယ်။
ဦးသန့်ဟာ ဘာသာတရားကို အလွန်ကိုင်းရှိုင်းသူ၊ မိခင်ကို ရိုသေသူဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေစဉ်မှာ
စေ့စပ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ မလုပ်ခင် နှစ်ဖက်စလုံးကို မေတ္တာပို့တယ်လို့လည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။
စိတ်ထားကောင်းပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်သူမို့ မျှတမှန်ကန်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာကို ကမ္ဘာက သိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ :hee:
အရင်က မဖတ်ဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ အစုံဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ တဂျီးမင်း။
ဘဂျီး ထည့်ထားဒဲ့ ဦးသန့် ပုံဂျီးဂလည်း
စာဂဒေါ့ နောက်မှ သေချာ အေးချေး ဖတ်ပလိုက်မယ် ..
ချဲချဲ ဘဂျီး …
ဦးသန့် လို နောက်ထပ် မြန်မာတစ်ယောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ် ထပ်ဖြစ်လာမယ့်သူများ ဘယ်တော့များမှ ရှိလာပါအုံးမလဲနော်။
ဦးသန့် ကတော့ လေးစားလောက်ပါပေတယ်ဗျာ။
ကျနော်တို့ ရွာသူားတွေ ပန်းတနော်သွားကြတုံးက ဦးသန့်စာကြည့်တိုက်ဝင်ခဲ့ကြဘို့ဘဲ။
ဒါပေမယ့် အချိန်လုသွားရတော့ မရောက်ခဲ့ကြ။
ဦးသန့်လို လေးစားစရာလူမျိုး နောက်တစ်ယောက်ထပ်ပေါ်ဘို့ကတော့
ဦးသန့်တာဝန်ယူစဉ်အချိန်က အတော်လေးကို ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အချိန်တွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ပါဘဲ။
ကျုပ်က..ပိုက်ပိုက်ပိုလျှံတာလေးရှိရင်.. ပန်းတနော်..ဦးသန့်ဇာတိမှာ.. ကျောက်တိုင်လေးလုပ်ချင်တယ်..လှူချင်တယ်ပြောခဲ့ဖူးတယ်..
အဲဒီကျောက်တိုင်မှာ.. အဲဒီနေရာကနေ.. ဦးသန့်သွားခဲ့ဖူးတဲ့..နိုင်ငံမြို့တော်တွေအကွာအဝေးကို.. ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေနဲ့ပြထားချင်တာ..
ပြောရရင်..နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကို.. ဘုရား..ပုထိုးတွေအတင်းပြနေတာ.. ။
ကျုပ်မှာ..မြန်မာပြည်က.. အလည် ပြန်လာတဲ့သူတွေအတင်းချတာ.. တော်တော်ခံရတယ်..။
အဲဒါမျိုး.. ရှိသင့်တဲ့.. အမှတ်အသားကျတော့..
လှူမယ့်သူမရှိ… စိတ်ဝင်စားသူမရှိ.. ပါဝင်ပါတ်သက်လုပ်မယ့်သူမရှိ..။
အမည်နာမတွေရေးထိုးထားတဲ့.. ကျောက်တိုင်.. အထိမ်းအမှတ်.. မလုပ်.. မထား..။
ဒါတွေ..အဲဒါတွေထားရင်.. နိုင်ငံခြားသားတွေစိတ်ဝင်တစားလာလည်ကြ..သတိရကြ.. ကြည့်ကြ.. ငွေသုံးကြမှာပေါ့..
အဲဒါနဲ့..အဲဒီနယ်. ငွေကြေးလည်ပါတ်မှုရှိပြီး.. . စီးပွားရေး..တက်လာမှာပေါ့..
အဲဒါမျိုးကို.. ဘိုးဘွားပေးရစ်ခဲ့တဲ့.. သေလွန်သူတွေပေးရစ်ခဲ့တဲ့.. အမွေလို့ခေါ်ရမှာ..။
ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေ..နေတဲ့တိုင်းပြည်..။ .. :buu:
ဒါကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါရဲ့ …။ သမိုင်းကိုရေးသွားတဲ့လူတွေက ရေးသွားပြီ
သူတို့တာဝန်ကျေ၏ ။ (Story Makingပိုင်းမှာ)
သူတို့ ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်များကတော့ Story Telling ပိုင်း အားနည်းနေဆဲ…
နောက်ပြီး ငွေစက္ကူအသစ် ထုတ်တဲ့အခါ
ဟိုသားအဖပုံအပြင် နောက်ထပ် ပါသင့်တဲ့ ပုံရိပ်အဖြစ်လည်း
တခါတလေ ဂလိုတောင် တွေးမိဒယ်…
ဟိုမားကတ္တင်း ပုံပြင်လေးကို အောက်မေ့ပြီးသကာလ …
ပေါင်ဒါရောင်းတဲ့ ကန်ပနီက မာကတ္တာတယောက် အရောင်းတက်အောင်
တခြားနည်းလမ်းစုံ သုံးပြီး ကြိုးစားပြီးသကာလ မထူးလို့ …
နောက်ဆုံး ပေါင်ဒါဗူး အပေါက်ချဲ့ပစ်လိုက်တော့ .. (သုံးရင်းလက်လွန်..မြန်မြန်ကုန်ပြီး)
ရောင်းအား ထိုးတက်သွားပါသတဲ့ …
အဲ့… မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးမော့လာအောင်လည်း ငွေစက္ကူကို
အူးဏေ၀င်း အူးတန်းချွေ တို့ ပုံတွေနဲ့ ထုတ်ရင် ကောင်းမလားမသိ…။
ဘယ်သူမှ လက်ထဲကြာကြာ မထားချင်မှာမို့ ..အရောင်းအ၀ယ်တွေ
တတ်သလောက် မှတ်သလောက် လုပ်နိုင်သလောက်တော့ လုပ်နေကြပါတယ်။
ပန်းတနော်မှာ ဦးသန့်ပုံတူကြေးသွန်းရုပ်တုနဲ့ ဦးသန့်စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်နေပါတယ်။
ခုခေတ်လူငယ်တွေ အားကျအောင် အတုယူနိုင်ကြအောင် ဦးသန့်အကြောင်းတစေ့တစောင်းဆိုပြီး စာပေဟောပြောပွဲလည်း လုပ်ခဲ့သေးတယ်။
အဲဒီခေတ်က သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းတွေ၊ စာစောင်ဖြတ်ပိုင်းတွေကို စုစည်းပြီး နံရံကပ်စာစောင်လုပ်တာတွေ့လို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပြီး fbမှာ တင်ထားသေးတယ်။
နိုင်ငံတကာ အတွေးအမြင် အတွေ့အကြုံရှိကြတဲ့ ဦးသန့်ရဲ့ သမီးနဲ့ မြေးတွေက လုပ်ရင် ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်နိုင်မယ် ထင်မိပါတယ်။
တည့်တည့်ပြောရရင်.. ဟိုတခါ ဒီရွာထဲပုံတင်တဲ့.. သီလရှင်ကြီးဆောက်တဲ့.. (လူသူမသွားတဲ့) ပုထိုးတော်ကြီးအစား.. အဲဒီလုပ်အား..ငွေတွေနဲ့.. ဦးသန့်ပြတိုက်အထိမ်းအမှတ်ဆောက်လိုက်ရင်.. ဆိုတဲ့သဘောပါ… အမတော်ရယ်..။
အဲလို.. ညွှန်စရာ.. သဘောတွေက… အများကြီး..။
မြန်မာတွေကို.. ချိုင်းနား အိန္ဒိယ..ယူအက်စ်ကြား.. အပေးအယူနဲ့.. ကစားတတ်ဖို့.. စာသင်ပေးနေတာ.. ညွှန်ရာလမ်းနဲ့.. ပြောင်းပြန်ကြီးသွားနေကြလို့.. စိတ်ပိန်နေပုံပဲ..
အမှား ဗဟုသုတနဲ့ ကြီးပြင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တဆင့်ဖေါက်သယ်ချပေးတဲ့ သဂျီးကိုလည်း ရှဲရှဲပါလို့….
သဂျီးမှားလား၊ ဤနေရာ မှားလားတော့မသိဘူး။
ဦးသန့်မြို့သူ သတ်ပုံဂိုဏ်ချုပ်ကြီး ကိုယ်စား
ဒီမှာလဲ “ပ” ပျောက်သွားတဲ့ သဘောဘဲ။
မကြာခဏ ပ ပျောက် အောင်လုပ်နေတာ။
ဦးသန့် ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့ အမေရိကန်-ဆိုဗီယက် တင်းမာမှု့ကို အခုထိ မကြာခဏ ပြန်သုံးသပ်မိတုန်းပဲ။
အဲဒီတုန်းက အမေရိကန်ရဲ့ ခံယူချက်က တော်တော်ပြင်းထန်သလို
ဆိုဗီယက်ရဲ့ ခေါင်းမာရဲတင်းမှု့ကလဲ အဆုံးစွန်အချိန်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ပြီးတော့ နှစ်ဦးလုံးရဲ့ ကိုယ့်အုပ်စုကိုယ်ခေါင်းဆောင်မှု့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မာန ကလဲ အလျှော့မပေးဖို့ တွန်းအားပေးနေတယ်။
ဒီအချိန်မျိုးမှာ (တန်း-တစ်စုံတစ်ရာရှိတဲ့) ကြားလူရဲ့ မျက်နှာငှား ဖြန်ဖြေမှု့ဟာ မရှိမဖြစ်လိုတယ်။
ဆိုဗီယက်နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ကြားကိုဝင်နိုင်တဲ့ တန်းဝင်သူဟာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးလို လူမျိုးသာဖြစ်နိုင်တယ်။
ဦးသန့်ဟာ အခြေအနေ အချိန်အခါက အတိအကျ တောင်းဆိုခံရတဲ့ သူပဲ…။
သူမှားရင် သူညံ့ရင် ကမ္ဘာ ပျက်သွားမှာ…။
ကျုပ်တို့ ကမ္ဘာကြီး ကံကောင်းတယ်
လူတော်တစ်ယောက်က လူမှန်နေရာမှန်မှာ အတိအကျ ရှိနှင့်တယ်။
အင်း… ဒီလိုတွက်ရရင် ကျုပ်အသက်ရှင်သေးတာ ဦးသန့်ကျေးဇူးကြောင့်လဲပါတာပေါ့ ..။
ငယ်ငယ်က ဦးသန့်ကမ္ဘာကျော်တာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးဖြစ်လို့ လို့ ထင်ခဲ့တာ။
နောက်ပိုင်း စာတွေဖတ်ရင်းနဲ့မှ ထူးခြားထက်မြက်စွာနဲ့ ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းကြီးတွေကို အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့လို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးတွေထဲမှာမှ ပိုပြီး ကျော်ကြားတာ၊ ကမ္ဘာကျော်တာဆိုတာကို သိခဲ့ရတယ်။ :hee:
အမှတ်မမှားရင်.. ဦးသန့်က..သူ့အိမ်မှာ ချဉ်ပေါင်ပင်စိုက်ပြီး… စားတယ်..။
ဆောင်းဝင်ရင် အရွက်တွေဝါလိုက်လာပြီး.. အပင်သေကြတာပဲ..။
ငယ်ငယ်က သတင်းစာမှာ ယူအန်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးဆုံးထင်သဗျ.. အမေရိကန်သမတ မဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူး.. တော်သေးရဲ့ အတင်းမလုပ်ခိုင်းလို့။
မောင်နေဝင်း ရဲ့ ဘဝမှာ မနာလိုဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ နံပါတ် ၁မဖြစ်ရင်တောင် ၂ ပဲ
အမှန်တော့ သူကြီး စိတ်ကူးက သိပ် ကောင်းသလို အကောင် အထည် ဖေါ် သင့်ပါတယ် ။
ဂေဇက် မန်ဘာတွေ လည်း၇ှိတယ် လေ။
ကျွန်တော် ဖြတ်သွားတိုင်း ပန်းတနော် က ဦး သန့် ဓါတ်ပုံနဲ့ စာကြည့် တိုက် သေးသးလေးကို
ကြည့်ပြီး ဦး သန့်ကို အားနာ တယ် ။
သူကြီး ကျောက် တိုင် စိုက်ရင် (ဆရာမ) မမ တို့ ဆရာနေချားတို့ ရှိတယ် ဦးဆောင် ပါလိမ့်မယ်
ကျွန်တော် လည်း ပန်း တနော် နဲ့ နီးပါတယ် ။ကူညီ နိုင်တယ် ။
ကျော်တိုင် စိုက်တာ ငွေ ကုန် ကြေးကျတအားကြီး များတာ မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော် တို့ မြို့မှာတောင်
နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ … အထိမ်းအမှတ်တ် ကျောက် တိုင် စိုက်မယ် ။
ဒီတော့ ကား ထုံးစံ အတိုင်း သူကြီး ကျောက် တိုင် ရွာသား ကောင်းမှု လုပ် ရရင် မကောင်း ပေ ဘူးလား
ဦးသန့်အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်လုပ်ဖို့အတွက် ငွေကြေးပမာဏ ဘယ်လောက်ကုန်မယ်ဆိုတာ မမှန်းတတ်ပေမယ့် တတ်နိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းအတာတော့ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
အတွက် သတင်းအချက်အလက်တွေတော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါကိုတော့ သဂျီး လုပ်ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
လုပ်ခွင့်ရှိမရှိနဲ့ ရေရှည်ထိမ်းသိမ်းဖို့တွေအတွက်ကိုတော့ မြို့ခံတွေကို မေးကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်။ မြို့အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်လို့ အခုလို အမှတ်တရကျောက်တိုင်စိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာစရာပါပဲ။
တကယ်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျောက်တိုင်စိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆရာထက်ကို အားကိုးရမယ်။ :hee:
အာဏာပိုင်တွေခွင့်ပြုချက်ရမှထင်တယ်နော် တော်ကြာပိုက်ဆံအလကားကုန်မှာစိုးလို့ ပါ
အရေးကြုံရင် အလှူခံဖို့ စာရင်းတို့ ထားရမယ်။ :harr:
ကမ္ဘာ့မြို့တွေနဲ့.. ပန်းတနော်နေရာအကွာအဝေးကတော့.. Google earth နဲ့ပြလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်..
မှာသွားကြည့်နေတာ.. ပလိပ်ပြားတခု.. 12″ x 24″ ကို ဒေါ်လာ၁၀၀လောက်ကျမယ့်ပုံ..
မြန်မာပြည်တွင်း..ဒါမှမဟုတ်.. ထိုင်းမှာ အများကြီးပိုသက်သာမယ်ထင်တာပဲ..။
သဘာဝတိုက်စားမှုသက်သာတဲ့.. အလှူမီနီယံ ဒါမှမဟုတ်.. စတီးပြားမှာ ထွင်းထုတာဆို.. ပိုကောင်းမယ်ထင်မိတယ်..။
သူ့ခေတ်နဲ့ သူပေါ့ ဦးပါရယ်။ :hee:
အဲဒီခေတ်တုန်းက ပန်းတနော်ဇာတိဆိုတာ ပြောတောင် မပြောရဲဘူး။
ပန်းတနော်အသင်းလည်း မလုပ်ရဲလို့ ပျက်သွားခဲ့သေးတယ်။ :eee:
ကိုထက်ဝေးရေ အကိုကပန်းတနော်သားဆို တော့ ဦးသန့် ရဲ့ဖခင် ဦးဖိုးနှစ်ကိုးကွယ်တဲ့
ဘာသာကို ချင်ပါတယ်. ကျတော်ကြား ထားတာက မြန်မာမွတ်စလင်ပါ. သိရင် အထောက်အထားနှင့်တကွ ပြန်ရှာပေးစေလိုပါတယ်. ပြန်ရှင်းပြစရာရှိလို့ ပါ.